MODA | Article Detail | မိုးရာသီမှာ လုံးဝမပြုလုပ်သင့်တဲ့ အလှအပထိန်းသိမ်းနည်းများ
Lady Gaga ရဲ့ သီချင်းသစ် Rain on Me ကလို လက်တွေ့မှာ မိုးရေထဲ ပြေးလွှားရင်း လှနေဖို့က ခက်ခဲပါတယ်။ မသန့်စင်တဲ့ လေထုပတ်ဝန်းကျင်ကိုဖြစ်စေတဲ့ မိုးရာသီက ကိုယ်သတိမထားမိခင်မှာပဲ အသားအရေကို ပုံမှန်ထက် ပျက်စီးသွားစေနိုင်ပါတယ်။ ရာသီဥတုပြောင်းလဲတာနဲ့ ကိုယ့်လုပ်နေကျ Skincare Step တွေ၊ Routine တွေကိုလည်း ပြောင်းလဲသင့်တယ်ဆိုတာ သတိထားမိရဲ့လား။ ပျိုမေတို့ မသိလိုက်ပဲ ပြုလုပ်နေလိုက်တဲ့အချက်တွေရှိနေမလားဆိုတာကို အောက်မှာ ဖော်ပြထားတဲ့အချက်လေးတွေမှာ ကြည့်လိုက်ရအောင်နော်။
မိုးမိလို့ ချမ်းတယ်ဆိုပြီး Hot Shower ကို မလုပ်မိဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ရေနွေးနဲ့ ရေချိူးတာက အသားအရေကို ခြောက်သွေ့ပျက်စီးစေပါတယ်။ ပိုပြီးဆိုးတာက Breakout ဖြစ်စေပြီး ကျောမှာ ဝက်ခြံတွေ ထွက်ဖို့အားပေးတာမို့ ရှောင်ရမှာပါ။ တော်တော်လေးအေးနေတယ်ဆိုမှ ရေကြက်သီးနွေးလေးနဲ့ ချိူးပေးတာက အကောင်းဆုံးဖြစ်မှာပါ။
Waxing အထူးသဖြင့် Private Area ကို ဒီလိုစိုစွတ်တဲ့ရာသီမှာ ပြုလုပ်တာက တော်တော်လေးကို နာကျင်စေမှာပါ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ မွေးညင်းပေါက်တွေမှာ ရောဂါပိုးဝင်လွယ်စေပြီး ပြည်တည်တာ၊ မှိုရောဂါစတာတွေကို ဖြစ်ပွားစေနိုင်လို့ ဒီလိုရာသီမှာ ပြင်းထန်တဲ့ Waxing ပြုလုပ်တာကို ရှောင်ရမှာပါ။
ရာသီဥတုကိုက စိုစွတ်နေတာဖြစ်လို့ ဒီအစိုဓာတ်ကြောင့် အသားအရေကို ရေဓာတ်ဖြည့်ဖို့ မလိုဘူးဆိုပြီး စိတ်ထဲက ဖြစ်နေမှာပါ။ အသားအရေကလည်း စိုထိုင်းထိုင်းဖြစ်နေတာကြောင့် ဒီအဆင့်ကို မလုပ်ပဲ ကျော်တတ်ကြပါတယ်။ အပြင်ဘက်မှာ ဘယ်လောက်ပဲ စိုထိုင်းနေပါစေ၊ အသားအရေက အာဟာရဓာတ်က လိုအပ်နေတာမို့ ဒီအဆင့်ကို မဖြစ်မနေပြုလုပ်ရမှာပါ။ ဒီရာသီမှာတော့ Lightweigh ဖြစ်တဲ့ Moisturiser၊ Oily မဖြစ်တဲ့ Water Based Product တွေကို အဓိကထားပြီး အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
နေမပြင်းပဲ မိုးအုပ်နေတာမို့ Sunscreen မသုံးပြုရဘူးဆိုတာ လုံးဝမှားတယ်နော်။ နေရောင်ခြည်က လာတဲ့ UV Ray က အပြင်ထွက်တာနဲ့ ထိတွေ့ရတာမို့ Sunscreen ကို မမေ့မလျော့လိမ်းပါ။ ကပ်စီးစီးဖြစ်တာ မကြိုက်တဲ့သူတွေ အတွက် Mattifying, Non Sticky Sunscreen တွေကို ဈေးကွက်ထဲမှာ ရှာဖွေဝယ်ယူလို့ရတယ်နော်။
မိုးရာသီမှာ အမြဲထိတွေ့ရတဲ့ ဗွက်အိုင်တွေ၊ မိုးရေတွေ၊ ကားဘေးက ဖြတ်သွားရင် စင်လာတဲ့ရေတွေစတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်က အရာတွေက ချွေးပေါက်ပိတ်စေပြီး အသားအရေကို ညစ်ညမ်းစေပါတယ်။ ဆိုတော့ အသားအရေကို Exfoliate လုပ်ပေးသင့်ပြီး လုပ်ရင်လည်း Gentle Exfoliate သာလုပ်ဖို့ အကြံပေးချင်ပါတယ်။ စိုပြေကြည်လင်တဲ့အသားအရေပိုင်ဆိုင်ဖို့ တစ်ပတ်ကို နှစ်ခေါက်ပြုလုပ်ပေးသင့်ပါတယ်။
Using Heavy Product
ကဲ ဒီရာသီမှာ အပြင်ထွက်တာနဲ့ ဂွမ်းစေမယ့်အရာတစ်ခုပါ။ စိုစွတ်ပြီး လေထုသိပ်သည်းစများတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်က အသားအရေကို အမှန်တကယ်ကိုညစ်ညမ်းစေပါတယ်။ မိတ်ကပ်ခပ်ထူထူလိမ်းတာက အသားအရေကို ပိုဆိုးစေပြီး စိုစွတ်နေတဲ့လေထုနဲ့ ထိတွေ့တာနဲ့ မိတ်ကပ်တွေကွက်ပြီး ရုပ်ဆိုးစေမှာပါ။ ဆံပင်အတွက်ဆိုလည်း Hair Spray တွေကို ရှောင်သင့်ပြီး ပေါ့ပေါ့ပါးပါးတာပြင်ဆင်သင့်ပါတယ်။ အဆီပါဝင်မှုများတဲ့ Product တွေအစား Water Based တွေ၊ Waterproof တွေကို အဓိကထားပြီး အသုံးပြုဖို့လိုပါတယ်။
Skincare Lover တွေကြားမှာ အပြောများနေတဲ့ Chemical Peel ကို သင်ကိုယ်တိုင်ကော လုပ်သင့်လား။
Chemical Peeling လုပ်ဖို့အတွက် Appointment ယူပြီးပြီလား။ ဒါမှမဟုတ် အိမ်မှာပဲ ကိုယ်တိုင် Try ကြည့်ဖို့ လုပ်နေလား။ ဒါတွေမလုပ်ခင် Chemical Peeling ကဘာလဲဆိုတာကို သိထားဖို့လိုမယ်နော်။ စစချင်းလုပ်မယ့် သူတွေအတွက်ကတော့ ကြောက်နေတတ်တာတွေရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် Chemical Peeling ဆိုတာက အသားအရေကို အသစ်ပြန်ဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ပေးတဲ့နည်းလမ်းတစ်ခုပါပဲ။ ပုံမှန် Peeling နဲ့မတူတဲ့အချက်က သူက အနည်းငယ်ပြင်းတဲ့ Chemical သုံးပြီး ဆဲလ်အသေတွေကို ခွာချတာဖြစ်တဲ့အတွက် နည်းနည်းလန့်စရာကောင်းနေတာပါ။ ဝက်ခြံသမားတွေ၊ အမာရွက်၊ အမဲစက်ရှိတဲ့သူတွေနဲ့ အသားအရောင်မညီတဲ့သူတွေအတွက် သိပ်ကိုထိရောက်တဲ့ Solution တစ်ခုဆိုလည်း မမှားပါဘူး။ ဈေးကွက်ထဲမှာကော၊ Aesthetics Clinic တွေမှာပါ ခေတ်စားနေတဲ့ ဒီ Peeling ရဲ့ ပတ်သတ်ပြီး သိထားသင့်တဲ့အချက်တွေကဘာလဲဆိုတာကို အားလုံးသိရအောင် မျှဝေလိုက်ရပါတယ်။
Chemical Peeling မှာ အမျိူးအစားသုံးမျိုးရှိပါတယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ အသားအရေပြဿနာနဲ့ လိုက်ပြီး ဒီသုံးမျိုးက ကွာသွားတာပါ။ ဆရာဝန်တွေက ဘယ်အမျိုးအစားသင့်တော်တယ်ဆိုတာ အသားအရေကိုကြည့်ပြီး ဆွေးနွေးပေးမှာပါ။ အဲ့ဒီသုံးမျိုးက ဘာတွေလဲဆိုတော့
Light - အရေပြားရဲ့အပြင်ဘက်ဆုံးမှာရှိတဲ့ အပေါ်ယံအလွှာကို ဖယ်ရှားပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ပတ်တစ်ကြိမ်ပြုလုပ်နိုင်ပြီး အပျော့ဆုံးအဆင့်ဖြစ်ပါတယ်။
Medium - အရေပြားရဲ့ အတွင်းလွှာထဲက ဆဲလ်တွေကို ဖယ်ရှားပေးတာဖြစ်ပြီး နှစ်ပတ်တစ်ကြျွိ ဒါမှမစုတ် သုံးပတ်တစ်ကြိမ်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
Deep - ဒါကတော့ အပေါ်ယံအလွှာ၊ အလယ်နဲ့ အဆုံးထဲက ဆဲလ်သေတွေကို ဖယ်ရှားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအဆင့်ကတော့ ကျွမ်းကျင်တဲ့ အရေပြားဆရာဝန်နဲ့ သေချာဆွေးနွေးပြသပြီးမှ ပြုလုပ်သင့်တဲ့အဆင့်ပါ။ အရေပြားကို အတွင်းပိုင်းကနေ လဲလှယ်လိုက်တာကြောင့် ပြန်လည်ကောင်းမွန်ဖို့အတွက် အချိန်ယူပြီး သတိပြုရှောင်ကျဉ်ရမယ့်အရာတွေပိုများပါတယ်။
ကိုယ့်ပုံမှန်အသားအရေ ကြည်လင်သန့်ရှင်းဖို့အတွက်ဆိုရင် Light နဲ့ Medium ကိုသုံးတာနဲ့ အဆင်ပြေပါတယ်။
Chemical Peeling လုပ်ပြီးရင် ဘာတွေကောင်းသွားလဲ?
- အရေးအကြောင်းနဲ့ လိုင်းတွေကို လျော့ပါးစေတယ်။
- Collagen ထုတ်လွှတ်မှုကို တိုးစေတဲ့အတွက် အသားအရေ နုပျိူတင်းရင်းလာတယ်။
- ဝက်ခြံ၊ ဆားဝက်ခြံနဲ့ တင်းတိပ်၊ အမာရွက်တွေ လျော့ပါးသက်သာလာတယ်။
- မျက်နှာသာမကပဲ ခြေလက်တွေ အသားအရောင်မညီတာတွေကိုလည်း ပျောက်ကင်းစေပါတယ်။
Side Effect တွေကကော?
အိမ်မှာ ပြုလုပ်တဲ့ အပျော့စား Peeling တွေကတော့ သိပ်ပြီးစိုးရိပ်စရာမရှိပါဘူး။ ဆေးခန်းမှာ လုပ်တဲ့ Peeling တွေကတော့ လုပ်ပြီး အသားအရေနီမြန်းတာ၊ ဝက်ခြံတွေပိုထွက်လာတာ၊ အဆီပြန်တာတွေ ဒါမှမဟုတ် အသားအရေခြောက်ပြီး အဖတ်လေးတွေကွာချလာတာဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒါကစိုးရိမ်ရတဲ့ လက္ခဏာမဟုတ်ပါဘူး။
အရေပြားက အတွင်းပိုင်းကနေ သူ့ဟာသူအလုပ်လုပ်နေတာမို့ ကိုယ်ဘက်က နေရောင်ခြည် တိုက်ရိုက်ထိတွေ့တာရှောင်မယ်၊ Moisturizer များများလိမ်းမယ်၊ Alcohol ပါတဲ့ Toner ကိုရှောင်မယ်။ Sunscreen ကိုအပြင်ထွက်တိုင်းလိမ်းမယ်၊ မျက်နှာကို ခဏခဏ ထိတွေ့ကိုင်တွယ်တာ ရှောင်မယ်ဆို အိုခေပါပြီ။ တစ်ခုသတိထားရမှာက Peeling ကို ကိုယ် သတ်မှတ်ထားတဲ့ Schedule လေးနဲ့ လုပ်သွားဖို့ပါ။ တစ်ခေါက်တည်းနဲ့ လိုချင်တဲ့ Result တော့ရမှာမဟုတ်လို့ ပုံမှန်ပြုလုပ်ပေးတာက အကောင်းမွန်ဆုံးရလဒ်ကို ရရှိစေမှာမို့ပါ။
မေမေတို့ အသားအရေနုပျိူလှပစေဖို့ အသုံးသင့်ဆုံး Skincare Product များ
အမေများနေ့မှာ အမေ့အတွက် အကောင်းဆုံးလက်ဆောင်လေး
Coronavirus ရဲ့အကျိူးသက်ရောက်မှုကြောင့် မိသားစုတော်တော်များများလည်း အိမ်ထဲမှာသာ အချိန်ကုန်ဆုံးနေရပြီး အမေများနေ့ကို အတူတူဖြတ်သန်းရမှာမို့ အဆိုးထဲက အကောင်းလို့ပဲ ပြောရမလားပဲနော်။ ဒီတော့ အမေ့ကို အံ့သြသင့်သွားစေမယ့်လက်ဆောင်လေးတွေ ပြင်ဆင်ပြီး ပေးဖို့လိုမယ်နော်။ အမေကို ပျော်ရွှင်ရအောင် လုပ်ပေးဖို့က ဘာမှ အပန်းမကြီးပါဘူးနော်။ ပန်းတွေဝယ်ပေးတာက တစ်ပတ်ကြာရင်ညှိုးသွားနိုင်တယ်၊ ချောကလတ်တွေဝယ်ပေးတာက စားလိုက်တာနဲ့ ဘာမှမကျန်ခဲ့ဘူးဖြစ်သွားနိုင်တယ်။ ဟင်းချက်ကျွေးဖို့ စဉ်းစားနေလား..နိုးနိုး အမေကပြန်ပြီးကူနေရပါလိမ့်မယ်။
ဆိုတော့ အမေရဲ့ အသားအရေ ပိုပြီးနုပျိူကျန်းမာအောင် Skincare ကောင်းကောင်းတစ်ခုပေးတာက သားသမီးတွေအတွက်ပဲ ဦးစားပေးနေတဲ့မေမေ့အတွက် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ဂရုစိုက်ရလည်းရောက်သလို အသားအရေကို ထိန်းသိမ်းရာလည်း ရောက်တာပေါ့။ ခုဖော်ပြပေးမယ့် Product လေးတွေက အရေးအကြောင်းတွေကို ဖယ်ရှားပေးပြီး အသားအရေအတွက် အားဖြည့်ပေးမယ့် Skincare ကောင်းကောင်းတွေဆိုတော့ အတွေးမများပဲ ရွေးချယ်လိုက်ရအောင်။ Shop.com.mm မှာ အမေများနေ့ အထူးအစီအစဉ်တွေနဲ့လည်း ရောင်းချပေးနေတာမို့ link လေးတွေ Click လုပ်ပြီး ဝယ်ယူနိုင်ပြီနော်။
Skinfood Black Pomegranate Wrinkle Line Cream
ဝယ်ယူနိုင်ရန် လင့်ခ် - https://bit.ly/2SJpnrX
Skinfood ရဲ့ နာမည်ကြီးတဲ့ Eye Cream လေးပါ။ Black Pomegranate ကထုတ်လုပ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် Ellagic Acid နှင့် Antioxidant တို့ ကြွယ်ဝစွာပါဝင်ပြီး Wrinkle & Line Care တွေအတွက် ကောင်းတဲ့ Product လေးပါ။ အသားအရေကို နူးညံ့တင်းရင်းခြင်း၊ မျက်လုံးဘေးအရေးအကြောင်းများနဲ့ VC Zone အရေးအကြောင်းလျော့ပါးသက်သာစေခြင်းနဲ အစိုဓါတ်ကိုထိန်းပေးနိုင်ပြီး အရွယ်တင်နုပျိုစေပါတယ်။
ဝယ်ယူနိုင်ရန် လင့်ခ် - https://bit.ly/2yzjlTW
Bioderma ရဲ့ Eyecream လေးက Editor ကိုယ်တိုင်လည်း သုံးနေတဲ့ Product လေးမို့ Recommend ပေးချင်ပါတယ်။ ကိုယ်တိုင်ပဲ သုံးသုံး၊ အမေအတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ် ဝယ်ထားပြီး သုံးနိုင်တယ်နော်။ မျက်လုံးနားတစ်ဝိုက်က အသားအရေကို စိုပြေနူးညံ့စေပြီး သုံးပြီး သုံး၊ လေးရက်ဆိုတာနဲ့ သိသာတဲ့ Product ကောင်းလေးပါ။
Loreal Revital Lift Anti Aging Micronized Centella Essence Water
ဝယ်ယူနိုင်ရန် လင့်ခ် - https://bit.ly/2WBRF8V
All in one Prouduct လေးလို့ ပြောလို့ရပါတယ်။ Skincare အဆင့်အများကြီးမလုပ်ချင်တဲ့ မေမေအတွက် အသုံးဝင်မယ့် Product လေးပါ။ ချွေးပေါက်များကိုကျဉ်း၍ ချောမွေ့စေပြီး အရေးအကြောင်းများ လျော့ကာ တင်းရင်းနုပျိုစေကာ အသားအရေ အသစ်ဖြစ်ရန် နှိုးဆွပေးပါတယ်။
ဝယ်ယူနိုင်ရန် လင့်ခ် -https://bit.ly/2Lb1Xrv
Gold Caviar Serum က ရုရှားမှ ထွက်ရှိတဲ့ ငါးဥတွေကိုရွှေစင်နှင့်ပေါင်းစပ်ပြီး အသားအရေအတွက်လိုအပ်တဲ့ အာဟာရ၊ Anti-aging ပါဝင်တဲ့ Adenosine က အိုမင်းရင့်ရော်ခြင်းနဲ့ အရေးအကြောင်းတွေကို လျော့ပါးစေနိုင်တဲ့ Serum လေးပါ။
Bioderma Photoderm Aquafluide
ဝယ်ယူနိုင်ရန် လင့်ခ် -https://bit.ly/2L9PXXm
Bioderma ရဲ့ အကောင်းဆုံး Product တွေထဲက တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ အိုမင်းရင့်ရော်မှုကို ကာကွယ်ဖို့ Sunscreen တွေကို မဖြစ်မနေလိမ်းပေးရမှာပါ။ ဒီ Photoderm မှာ အရောင်အနေနဲ့လည်း သုံးမျိူးရှိတာမို့ စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်။ မိတ်ကပ်လိမ်းတာမကြိုက်တဲ့ မမေအတွက် အသားရောင်ဘူးလေးက မျက်နှာမှာ ဖုံဖုံသိပ်သိပ်လေးနဲ့ ကြည့်ကောင်းနေစေမှာပါ။
Garnier Ageless White Anti Aging Day & Night Bundle
ဝယ်ယူနိုင်ရန် လင့်ခ် - https://bit.ly/3djjslk
အသားအရေကောင်းမွန်ဖို့အတွက် Day Cream တစ်ခုထဲနဲ့ မလိုလောက်သလို Night Cream ပဲလိမ်းလို့လည်း ထိထိရောက်ရောက်မရှိပါဘူး။ Garnier က Day Cream ကော Night Cream ပါပါတဲ့ Set လေးကို Shop.com.mm မှာ ဝယ်ယူရင် Facial Foam တစ်ခုပါ Free ရမှာမို့တော့ အရမ်းကိုတန်နေပါပြီ။ ညစ်ညမ်းနေတဲ့ အသားအရေကို သန့်စင်ပေးပြီး နူးနူးအိအိနဲ့ တင်းရင်းတဲ့ အသားအရေကို ပြောင်းလဲပေးမှာပါ။
ဝယ်ယူနိုင်ရန် လင့်ခ် - https://bit.ly/3cdb6f1
ဒီ Product လေးက အသက်နှစ်ဆယ်ကျော်ကနေ စပြီး ပေါ့ပေါ့ပါးပါးသုံးနိုင်တဲ့ Facial Foam ပါ။ သက်လတ်ပိုင်းနဲ့ သက်ကြီးပိုင်းတွေကြားတွေကြားမှာလည်း အရမ်းကို ရောင်းရပြီး လူကြိုက်များတဲ့ Product လေးပါ။
#Mom & Daughter
မေမေ့ရဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာတွေကို ပြန်လည်ထုတ်ဖော်ပြသနိုင်မယ့် အကောင်းဆုံး Facial Mask များ
ကျန်းမာလှပတဲ့မေမေ့အသားအရေကို ကြည့်ပြီး ပျော်ရွှင်မှုကို အတူခံစားဖို့
ပန်းစည်းလေးတစ်စည်း၊ Wish Card လေးတစ်ကဒ်နဲ့ ဂုဏ်ပြုရင်တောင်မှ ဝမ်းသာလို့မဆုံးဖြစ်နေမှာ အမေတွေပါ။ ဒါပေမယ့် မေမေတို့အတွက် ဒီထက်ပိုပြီး စဉ်းစားမပေးသင့်ဘူးလား။ သူငယ်ချင်း၊ ချစ်သူရည်းစားအတွက် လက်ဆောင်ပေးဖို့တောင် ခေါင်းရှုပ်ခံစဉ်းစားသေးကြတာပဲလေနော်။ မလှချင်ဘူးဆိုတဲ့ အမေဆိုတာရှိမှာ မဟုတ်လို့ သူ့အတွက် အသုံးဝင်မယ့် အလှအပလက်ဆောင်လေးကို စီစဉ်တာမကောင်းဘူးလား။ ပုံမှန်အချိန်တွေမှာ ဆိုရင်တော့ အမေနဲ့ အတူ Spa လေးသွားပြီး Facial Treatment လေးယူ၊ ညနေစာလေးစားပြီး အချိန်ကုန်ဆုံးလို့ရမှာပါ။ ဒီနှစ်ကတော့ Covid 19 ကြောင့် အပြင်ထွက်လို့မရတဲ့အခြေအနေဆိုတော့ အိမ်မှာပဲ အမေ့ကို Facial Mask လေးကပ်ပေးပြီး ရင်းနှီးမှု ပိုပြီးယူကြတာပေါ့ (Online Shop က မှာထားတဲ့ ပစ္စည်းတွေကိုလည်း ငွေချေခိုင်းရင်ပေါ့)။
Arbutin Glow Boosting Mask
Mask ကို မပြောခင် မသိသေးတဲ့သူတွေအတွက် My Beauty Diary ဆိုတာက Hong Kong က နာမည်ကြီး Face Mask Brand တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ်ပိုင်ဓာတ်ခွဲခန်းနဲ့ အသားအရေအမျိူးအစားတိုင်းအတွက်လိုအပ်တဲ့ Face Mask တွေကို စနစ်တကျထုတ်လုပ်နေတဲ့ Beauty Brand လို့ ပြောလို့ရပါတယ်။
Arbutin Glow Mask က မယ်လနင်ထွက်ရှိမှုကို အထိရောက်ဆုံးဟန့်ထားနိုင်တဲ့ Arbutin နဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုကြောင့် ဖြစ်တဲ့ အသားအရေပျက်စီးခြင်းကို ကာကွယ်ပေးနိုင်တဲ့ သစ်ဥသစ်ဖုတွေပါဝင်ပါတယ်။ အပြင်မှာ အလုပ်လုပ်နေရတဲ့ မေမေတွေအတွက် စိတ်ဖိစီးလျော့ချဖို့နဲ့ အသားအရေ Firming ဖြစ်ဖို့အတွက် ဒီ Mask က မဖြစ်မနေလိုအပ်မှာပါ။
Imperial Bird's Nest Nourishing Mask
Bird's Nest ဆိုတဲ့အတိုင်း အသားအရေအတွက် လိုအပ်တဲ့အာဟာရ အပြည့်အဝဖြည့်တင်းပေးမယ့် Mask ပါ။ ဒီ Mask က @Cosme ရဲ့ 2017 Best Facial Mask ထဲမှာ တတိယအဆင့်ရရှိထားတဲ့ Mask လေးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ငှက်သိုက်မှာ အာဟာရဓာတ်အမြင့်မားဆုံးဖြစ်တဲ့ အမိုင်နိုအက်စစ်၊ ကော်လဂျင်နဲ့ ကာဗွန်ဟိုက်ဒြိတ်ဓာတ်များစွာပါဝင်လို့ ဆေးအဖြစ်တောင်မှီဝဲကြတာ အားလုံးအသိနော်။ မွဲခြောက်ကြမ်းတမ်းမှုနဲ့ အသားအရေလျော့တွဲမှုကို သိသိသာသာကောင်းမွန်စေလို့ မေမေအတွက် Must Buy လေးပါ။
၀ယ်ယူနိုင်မယ့်လင့်ခ် - https://bit.ly/2WznLlZ
ဘူဂေးရီးယားနိုင်ငံက ထွက်တဲ့ ပြင်သစ်နှင်းဆီနဲ့ ဖော်စပ်ထုတ်လုပ်ထားတာဖြစ်ပြီး အသားအရေမည်းညစ်မှု၊ နီမြန်းမှုကို ဖယ်ရှားပေးပြီး အသားအရေကို ကြည်လင်သန့်စင်စေပါတယ်။ တစ်နေကုန် မီးဖိုချောင်ထဲမှာပဲ ဆီတွေ၊ မီးခိုးငွေ့တွေနဲ့ ထိတွေ့နေရတဲ့ မေမေရဲ့ အသားအရေအတွက် ဒီ Mask လေးက အသင့်တော်ဆုံးပါပဲ။ နောက်ထပ် အကျိူကျေးဇူးတွေအနေနဲ့ တင်းတိပ်ဖြစ်ခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးပြီး ဆဲလ်သေတွေကို ဖယ်ရှားပေးပါတယ်။
My Beauty Diary ရဲ့ အရောင်းရဆုံး Mask လေးပါ။ ထိုင်ဝမ်ရဲ့ Whitening Facial Mask တွေထဲမှာ ရောင်းအားအကောင်းဆုံး Mask အဖြစ် ရပ်တည်နေခဲ့တာဖြစ်ပြီး အာရှတိုက်တော်တော်များများမှာလည်း ဆုတံဆိပ်တွေရရှိထားတဲ့ Mask လေးပါ။ Tahiti ပုလဲနက်က ဗီတာမင်၊ သတ္တုဓာတ်နဲ့ အမိုင်နိုအက်ဆစ်ဓာတ်တွေ ပါဝင်တဲ့အတွက် ခြောက်သွေ့နွမ်းလျနေတဲ့ အရေပြားအတွက် လိုအပ်တဲ့ ရေဓာတ်နဲ့ အာဟာရဓာတ်ကို အနှိုင်းရှိုင်းဆုံးထိဖြည့်တင်းပေးနိုင်ပါတယ်။ မိတ်ကပ်လိမ်းတာမကြိုက်တဲ့မေမေအတွက် ဒီ Mask လေးက ကပ်ပြီးသွားချိန်မှာတောင် စိုစိုပြောင်ပြောင်လေးဖြစ်စေတာမို့ အကြိုက်တွေ့စေမှာပါ။
ခုပြောပြသွားတဲ့ Mask လေးတွေက မေမေတို့အသားအရေနဲ့ ကိုက်ညီပြီး သိသာတဲ့ရလဒ်ကို ရဖို့အတွက် အမြဲပုံမှန်ကပ်ပေးဖို့ သတိပေးဖို့တော့လိုမယ်နော်။ သတင်းကောင်းအနေနဲ့ တစ်ခုချင်းဝယ်တာထက် ပိုတန်တဲ့ ၁၂ခုပါ Package ကို Shop.com.mm မှာ အထူးဈေးနှုန်းနဲ့ ရောင်းချပေးနေပြီမို့ အမေများနေ့အမှီ မှာယူဖို့ အခုပဲလုပ်လိုက်တော့နော်။ ၀ယ်ယူနိုင်မယ့်လင့်ခ် - https://bit.ly/2WznLlZ
မျက်နှာလေး ဖွေးဖွေးကြည်ကြည်လေးဖြစ်ဖို့အတွက် Product ကောင်းလေးတစ်ခု
ပုံမှန်သွားလာနိုင်တဲ့အချိန်ကျရင် သူ့ထက်ငါအပြိုင်လှပကျော့ရှင်း Beauty Queen ဖြစ်နေမှာပါ။
အခုလို Stay Home နေနေရတဲ့အချိန်မှာ မိန်းကလေးတွေ အသားအရေကို ပုံမှန်အချိန်ထက် ပိုပြီး ထိန်းသိမ်းဖြစ်နေမှာပါ။ အိမ်ထဲမှာ တစ်နေကုန်နေရတာကြောင့် ကိုယ့်အသားအရေနဲ့ မျက်နှာအတွက် ကောင်းမယ့်အရာလေးတွေကို Google လေးခေါက်လိုက်၊ ရှာလိုက်နဲ့ မအားနိုင်ဖြစ်နေမှာ အသေအချာပါ။
မျက်နှာလေး ကြည်ကြည်ဖြုဖြုလေးဖြစ်ချင်တဲ့ ပျိုမေအတွက် အပြင်လည်း မထွက်ရတဲ့အတူတူ အိမ်ထဲမှာနေတဲ့ကာလအတွင်း အသုံးပြုနိုင်မယ့် Product လေးတစ်ခုကို ပြောပြချင်ပါတယ်။ ကိုးရီးယားနိုင်ငံကထုတ်တဲ့ Pacific Beautex ရဲ့ Whitening & Anti-Aging Cream လေးပါ။ ငယ်ရွယ်တဲ့အချိန်တည်းက အရေးအကြောင်းတွေကို ကြိုတင်ဂရုစိုက်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက် ဒီ Product လေးက တစ်ချက်ခုတ် နှစ်ချက်ပြတ်ပါပဲ။ ဒါကဘာလဲဆိုတော့ အရေးအကြောင်းတွေကို လျော့ပါးစေပြီး မျက်နှာကို ဝင်းပဖြုစင်စေတာပါ။
Pacific Beautex Whitening & Anti-Aging ခရင်(မ်) မှာ အသားအရေအတွက် ကောင်းလှပါပေ့ဆိုတဲ့ ဗီတာမင်-စီ၊ အက်ဆီးတစ်အက်စစ်နှင့် ဗီတာမင်-အီး၊ Chamomile Extract (ချာမိုမိုင်းအနှစ်)၊ Arbutin (အာဗျူတင်)၊ ထောပတ်သီးအနှစ်၊ ရှားစောင်းလက်ပပ်အနှစ်တို့ပါဝင်ပါတယ်။
ချာမိုမိုင်းအနှစ်မှာ အသားအရေအတွက် အရေးကြီးတဲ့ ဓာတ်တိုးဆန့်ကျင်ဂုဏ်သတ္တိပါဝင်လို့ အသားအရေ အိုမင်းရင့်ရော်ခြင်းကို ကာကွယ်ပေးတယ်။ အာဗျူတင်ကတော့ အသားအရောင်ကို ညိုမည်းစေတတ်တဲ့ မယ်လနင်ဓာတ်ကို ဟန့်တားပေးတာကြောင့် အသားအရေဖြူဝင်းတောက်ပစေတယ်။ အသားအရေအတွက် ကောင်းတယ်လို့ နာမည်ကြီးတဲ့ ရှားစောင်းလက်ပပ်အနှစ်က နေလောင်ထားတဲ့အကွက်တွေ၊ အမည်းစက်တွေကိုလည်း လျော့ပါးစေပါတယ်။ ထောပတ်သီးအနှစ်မှာလည်း အစိုဓာတ်ပြည့်ဝစွာပါဝင်လို့ အရေပြားခြောက်သွေ့ခြင်းနဲ့ ကွာကျခြင်းကို ကာကွယ်ပေးပြီး အသားအရေစိုပြည်နူးညံ့ချောမွေ့စေပါတယ်။ သဘာဝသစ်ဥသစ်ဖုများနဲ့ ထုတ်လုပ်ထားတာကြောင့် Side Effect အတွက်လည်း စိုးရိမ်စရာမလိုပါဘူး။
ဒီ Brand ကနေ အခြား Product တွေလည်း အများကြီးထွက်ထားတာတွေ့ရပါတယ်။ Drugstore ပစ္စည်းထဲကမှ မျက်နှာကို Whitening ဖြစ်ချင်တဲ့ပျိုမေတွေအတွက် ဒီ Product လေးက Try ကြည့်သင့်ပါတယ်။
အိမ်မှာပဲအလွယ်တကူပြုလုပ်နိုင်တဲ့ BUDGET TONER (PART 2)
ကိုယ့်အသားအရေနဲ့ လိုက်ဖက်တဲ့ သဘာ၀ Toner ကို ကိုယ်တိုင်လုပ်ကြည့်ကြမယ်။
ကဲ ဒီတစ်လောကတော့ အားလုံးလည်း အိမ်ထဲမှာ အောင်းနေရတဲ့အချိန်ဆိုတော့ (အပြင်မထွက်ဘူးလို့ မျှော်လင့်ပါတယ်) အပျင်းလည်းပြေအောင်၊ မျက်နှာလေးလည်းလှအောင် Budget Toner အပိုင်း ၂ ကိုဆက်ချင်ပါတယ်။ Part 1 ကို Click ပြီးတော့လည်း မသိလိုက်တဲ့ နည်းလမ်းလေးတွေကို ပြန်ဖတ်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။ ဆိုတော့ Budget Toner ဆိုတဲ့အတိုင်း အိမ်ထဲမှာပဲ ပစ္စည်းအနည်းငယ်နဲ့ ကိုယ်တိုင်လုပ် Toner လေးကို စလိုက်ကြည့်ရအောင်နော်။
Acne-prone skin တွေအတွက် Right Product တွေကရှာရခက်ခဲပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အန္တာရယ်ကင်းတဲ့ သဘာ၀ Face Toner ကိုတော့ ကိုယ်တိုင်စနစ်တကျပြုလုပ်နိုင်တယ်နော်။ ကိုယ့်အသားအရေအတွက် မှန်ကန်တဲ့ Product ကို ကိုယ်တိုင်ပဲသိတဲ့အတွက် ဒီနည်းလမ်းက အသုံးတည့်မှာပါ။
Tea Tree & Green Tea Toner
အရေပြားရောင်ရမ်း၊ ပိုးဝင်တာတွေက ဝက်ခြံသမားတွေရဲ့ လက္ခတာတွေပဲဆိုတော့ နီမြန်းတာနဲ့ ပိုးဝင်တာကို ကာကွယ်ကုသရမှာပါ။ Tea Tree နဲ့ Green Tea က ဝက်ခြံသမားတွေကြားမှာနာမည်ကြီးတဲ့အတွက် ဝက်ခြံကာကွယ်မယ့် Toner လေးလုပ်ကြည့်ရအောင်။
- Green Tea လက်ဖက်ခြောက်နှစ်ထုပ်ကို ရေနွေးထဲမှာ နှပ်ထားပါ။ ပြီးနောက် အအေးခံထားပါ။
- ကိုယ်သုံးမယ့် ဘူးလေးထဲကို ပြောင်းထည့်ပြီး Tea Tree Oil အစက်အနည်းငယ်နဲ့ ရောမွှေပါ။
Sensitive Skin သမားတွေကလည်း မိတ်ကပ်ပစ္စည်းနဲ့ Skincare ပစ္စည်းမှားသုံးမိတာနဲ့ ဓာတ်မတည့်မှုဖြစ်လာပြီး နီမြန်းယားယံလာတာတွေဖြစ်လေ့ရှိပါတယ်။ ဝက်ခြံသမားတွေလိုပဲ Sensitive Skin တွေအတွက် ထုတ်ထားတဲ့ Product တွေကိုသာ ရွေးချယ်အသုံးပြုရတာပါ။
Toner အတွက်ကိုတော့ နီမြန်းယောင်ရမ်းတာကို လျော့နည်းသက်သာစေမယ့် Ingredient တွေဖြစ်တဲ့ Rose Water နဲ့ Chamomile Toner လေးကို အသုံးပြုကြည့်သင့်ပါတယ်။
Rose Water & Chamomile Toner
Rose Water က အားလုံးသိတဲ့အတိုင်း အသားအရေကိုသန့်စင်ပေးပြီး Antioxidative ပါဝင်တာမို့ UV Ray နဲ့ လေထုညစ်ညမ်းမှုကြောင့် ဖြစ်တဲ့ အသားအရေကို ညစ်ညမ်းပျက်စီးစေတာကို ပျောက်ကင်းသက်သာစေပါတယ်။ Chamomile ကလည်း Sensitive သမားတွေအတွက် အကောင်းဆုံး Ingredient ဖြစ်ပြီး နီမြန်းတာကို လျော့ချပေးပါတယ်။ Rose Water အတွက်ကို စိတ်မပူနဲ့။ ကိုယ်တိုင်လွယ်လွယ်ကူကူ သဘာဝအတိုင်းလုပ်နိုင်အောင် ပြောပြပေးထားတယ်နော်။
- နှင်းဆီဖတ်လွှာနှစ်လွှာလောက်ကို ရေသုံးခွက်အချိူးနဲ့ မိနစ်သုံးဆယ်ခန့် ပြုတ်ပါ။
- ရလာတဲ့ Rose Water ထဲကို Chamomile Oil အနည်းငယ်ထည့်ပါ။
- ကိုယ်အသုံးပြုမယ့် ဘူးလေးထဲ ပြောင်းထည့်ပြီး အအေးခံထားပါ။
- Chamomile Oil မရှိရင်လည်း Chamomile Tea အထုပ်ကရတဲ့ အဆီအနှစ်ကို အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
ကျန်းမာတဲ့ အသားအရေနဲ့ စိတ်ကြည်လင်လန်းဆန်းခြင်းရဲ့ လျှိူ့ဝှက်ချက် Mosbeau
ကိုယ်ခံစွမ်းအားကို မြှင့်တင်ပေးနိုင်လို့ ဒီလိုအချိန်မှာ သောက်သုံးဖို့အသင့်တော်ဆုံးပါ။
တိုးတက်ပြောင်းလဲလာတဲ့ ဒီဘက်ခေတ်မှာ အမျိူးသား၊ အမျိူးသမီး ကြီးကြီးငယ်ငယ်မရွေး စိတ်ဖိစီးမှုနဲ့ အိုမင်းရင့်ရော်မှုဒဏ်ကို အရင်ကထက် ပိုမိုရင်ဆိုင်လာရပါတယ်။ ရာသီဥတု ဖောက်ပြန်မှုတွေနဲ့အတူ နေ့စဉ် ထိတွေ့နေရတဲ့ လေထုညစ်ညမ်းမှု၊ အပူဒဏ်နဲ့ အမျိုးမျိူးသော ရောဂါပိုးမွှားတွေက ကျွန်မတို့ရဲ့ အသားအရေနဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကို ထိခိုက်ပျက်စီးစေပါတယ်။ ဖြုဖွေးကြည်လင်တဲ့အသားအရေရအောင်၊ ကျန်းမာသန်စွမ်းတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ရအောင် နည်းလမ်းအမျိူးမျိူးနဲ့ ကြိုးစားကြည့်ပေမယ့်လည်း မထိရောက်တဲ့အချိန်တွေ ကြုံဖူးကြမှာပါ။ အပြင်ပိုင်းက ဘယ်လောက်ပဲပြုပြင်၊ အတွင်းထဲက ပြောင်းလဲမှသာ ကောင်းမွန်တဲ့ ရလဒ်တစ်ခုကို မြင်တွေ့ခံစားရမှာပါ။ ဒီလို ကောင်းမွန်တဲ့ ရလဒ်ရရှိဖို့အတွက် နေ့စဉ်စားသောက်မှုပုံစံမှာ အာဟာရဓာတ်ပြည့်ဝတဲ့ ကျန်းမာသော အစားအသောက်တွေကိုသာ ရွေးချယ်စားသောက်ရမှာပါ။ နေ့ဓဒူ၀ လုပ်ငန်းတာဝန်တွေနဲ့ မအားလပ်နိုင် ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာ ကျန်းမာရေးလိုက်စားဖို့ကို မေ့လျော့နေတတ်ကြပါတယ်။ တကူးတကအချိန်ပေးပြီး မထိန်းသိမ်းနိုင်တဲ့သူတွေအတွက် Food Supplement တွေက အစားထိုးဝင်ရောက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ ပုံမှန်နေထိုင်စားသောက်မှုပုံစံမှာမရနိုင်တဲ့ အသားအရေနဲ့ ခန္ဓာကိုယ်အတွက် လိုအပ်တဲ့ ဓာတ်သတ္တုတွေပါဝင်တဲ့ Food Supplement တွေကို လူတိုင်းက စွဲစွဲမြဲမြဲမှီဝဲလာကြပါတယ်။ အခုမှ စသောက်သုံးမယ့်သူတွေအနေနဲ့ မေးစရာရှိမှာက ဒီ Supplement တွေက အန္တရာယ်ကင်းရဲ့လား၊ ဘေးထွက်ဆိုးကျိူးမှာရှိမလားဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေပါ။
Mosbeau က ထုတ်တဲ့ Placenta White Advanced အကြောင်းသိပြီးပြီလား။ Mosbeau ဆိုတာက ကမ္ဘာ့နာမည်ကြီး အမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းက သန်းပေါင်းများစွာသော အမျိုးသမီးတွေ ယုံယုံကြည်ကြည်သောက်သုံးတဲ့ Supplement ပါ။ ၂၀၁၅ခုနှစ်က ဂျပန်နိုင်ငံမှာ Best Supplement Award ရရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီး ဂျပန်နိုင်ငံထုတ်ဖြစ်တဲ့အတွက် အရည်အသွေးပိုင်းက လုံးဝယုံကြည်စိတ်ချလို့ရပါတယ်။ Mosbeau Placenta White Advanced Food Supplement မှာ Horse Placental Protein နဲ့ ဂျပန်နိုင်ငံက ထွက်ရှိတဲ့ Marine Placental Protein အပြင် Active Ingredient ၁၀ မျိုးပါဝင်တဲ့ ပထမဆုံးနဲ့ တစ်ခုတည်းသော Supplement ဖြစ်ပါတယ်။
အလှအပအတွက် အကျိုးကျေးဇူးတွေအနေနဲ့ အသားအရေဖြူဖွေးစေခြင်း(Whitening)၊ အိုမင်းရင့်ရော်မူ့ကို တားဆီးပေးခြင်း (Anti-aging)၊ အရေပြားဆဲလ်အသစ်များ ထွက်ပေါ်စေခြင်း၊ ဟော်မုန်းဓာတ်ကို ထိန်းညှိပေးပြီး ဝက်ခြံထွက်ရှိမှုကို သက်သာပျောက်ကင်းစေခြင်း၊ အစိုဓာတ်ထိန်းပေးခြင်း၊ တင်းတိပ် ကဲ့သို့ အမဲအစက်အပြောက်များကိုလျှော့ချပေးခြင်း၊ အရေးအကြောင်းများလျှော့ချပေးခြင်း၊ ဆံပင်ကျွတ် ပျက်စီးခြင်းကိုသက်သာစေခြင်းနဲ့ အသားအရေကို ပြန်လည်တင်းရင်းစေခြင်းတို့ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ကျန်းမာရေးအတွက် ကောင်းမွန်တဲ့အကျိူးကျေးဇူးတွေလည်းရှိပါသေးတယ်။ အဆိပ်အတောက်များ ဖယ်ရှားပေးခြင်း (Antioxidant)၊ သွေးလှည့်ပတ်မှုကောင်းစေခြင်း၊ ဟော်မုန်းဓာတ်ထိန်းချုပ်ပေးခြင်း၊ အရေပြားဓါတ်မတည့်မှုကို ကာကွယ်ပေးခြင်း၊ မှတ်ဉာဏ်စွမ်းအားများ လျှော့နည်းခြင်းကို သက်သာစေခြင်း၊ ခန္ဓာကိုယ်ပင်ပန်းနွမ်းနယ် မောပန်းလွယ်၊ စွမ်းအင်ကုန်ခမ်းခြင်းကို လျှော့ကျသက်သာစေခြင်း၊ ညဘက်အိပ်မပျော်ခြင်းကို ကာကွယ်ပေးခြင်း၊ စိတ်ဖိစီးမူကိုလျှော့ချစေပြီး စိတ်ကျရောဂါဖြစ်ခြင်းကို ကာကွယ်ပေးခြင်း၊ အရက်ကြောင့်အသည်းထိခိုက်မူကို ကာကွယ်ပေးခြင်း၊ အသားအရေ ရောင်ရမ်းနီရဲခြင်း ကိုသက်သာစေခြင်း၊ ရောဂါပိုးမွှားများဝင်ရောက်ခြင်းကို ကာကွယ်ပေးခြင်း၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ စွမ်းဆောင်ရည်များကျဆင်းလာခြင်းကို တားဆီးပေးခြင်း၊ Cholesterol ဓာတ်ကို လျှော့ချပေးခြင်း၊ ဆီးချိုရောဂါသည်တွေအတွက် သကြားဓာတ်ကို ထိန်းညှိပေးခြင်း၊ အရိုးအားနည်းခြင်းကို ကာကွယ်ပေးပြီး အရိုးများကိုသန်မာစေခြင်း၊ ရင်သားကင်ဆာနဲ့ အချိူ့သောကင်ဆာရောဂါဖြစ်ခြင်းကို ကာကွယ်ပေးခြင်း စတဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကို ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဖြည့်စွက်စာအနေနဲ့ သဘာဝအတိုင်းထုတ်လုပ်ထားတာဖြစ်လို့ ကိုယ်တွင်းက အဆိပ်အတောက်တွေကိုပါ သန့်စင်ပေးပါတယ်။ သဘာဝပစ္စည်းတွေနဲ့သာ ထုတ်လုပ်ထားပြီး ဓာတုပစ္စည်းပါဝင်မှုမရှိလို့ ဘေးထွက်ဆိုးကြိုးနဲ့ ဓာတ်မတည့်တာအတွက် စိုးရိမ်စရာမလိုဘူးပေါ့။ နာမည်ကြီး Celebrity တွေလည်း ယုံယုံကြည်ကြည် အသုံးပြုလာကြတာဖြစ်ပြီး Mosbeau ကိုစွဲစွဲမြဲမြဲသုံးစွဲနေတဲ့ ပြည်သူ့အချစ်တော် ပရဟိသမင်းသမီးလေး ခိုင်နှင်းဝေကလည်း သူမရဲ့ အတွေ့အကြုံတွေကို မျှဝေပေးခဲ့ပါတယ်။ “အသားအရေကြည်လင်ပြီး မျက်တွင်းညှိတာတွေပျောက်လာတယ်။ အလုပ်ဖိစီးမှုကြောင့် ညဘက်အိပ်မပျော်ဖြစ်တတ်ပေမယ့် ဒီဆေးသောက်ပြီးနောက်ပိုင်း နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက်အိပ်ပျော်လာတယ်။ အဓိက Resistance ကောင်းလာတယ်။ ပင်ပန်းတဲ့ ဒဏ်ခံနိုင်လာတယ်။ ဒီဆေးကို မနက်အစောပိုင်းသောက်လို့ရသလို ညဘက်အိပ်ရာဝင်ခံနီးလည်း သောက်လို့ရပါတယ်။ အစကဆိုနည်းနည်းဆိုတာနဲ့ ပင်ပန်းတယ်၊ အားမရှိဘူး။ အခုတော့ သူများတွေတုပ်ကွေးဖြစ်ရင်တောင်မှ ကိုယ်က ဒေါင်ဒေါင်မြည်ပဲ။ အပူဒဏ်ကြောင့် ဖြစ်တဲ့ နေလောင်ဒဏ်၊ အသားအရေမဲညစ်သွားတာတွေကို အခြားလူတွေ တစ်ပတ်နှစ်ပတ်ကုစားနေရတဲ့အချိန်၊ ကိုယ်က လေးငါးရက် နဲ့ နဂိုအသားအရောင်ကို ပြန်ရတယ်။ ကျန်းမာရေးအတွက်ကော၊ အလှအပအတွက်ပါ ကောင်းတဲ့ဆေးလေးပါ။ ဒီဆေးသောက်ပြီးထဲက ဘာအားဆေးမှမလိုတော့ဘူး။ သိသာတဲ့အချက်လေးတစ်ချက်က ခိုင်နှင်းေ၀ အရမ်းတွေနုလာတယ်လို့ ပြောလာကြတာပါပဲ။”
Mosbeau ဆေးရဲ့ အာနိသင်အနေနဲ့ သောက်ပြီးပြီးချင်း ၁၄ ရက်မှာ အသားအရေ ချောမွေ့လာစေပါတယ်။ ၉ ပတ်ဆိုရင်တော့ သိသာတဲ့အသားအရေပြောင်းလဲမှုကို ခံစားရရှိမှာပါ။ ချက်ခြင်းလက်ငင်း သိသာတဲ့ဆေးမဟုတ်လို့ နှစ်လကနေ လေးလထိသောက်သုံးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ လေးလသောက်ပြီး လိုချင်တဲ့အသားအရေ ရပြီးသွားရင် ရပ်လိုက်လို့လည်းရပါတယ်။ နေပူလှုံတာ ရှောင်မယ်၊ နေပူထဲထွက်ရင် Sunblock SPF 50 ပါတာကို သေချာလိမ်းမယ်၊ အပူကို အတတ်နိုင်ဆုံးရှောင်ပေးမယ်ဆိုရင် အာနိသင်က မပျယ်သွားဘူးလို့ သိရပါတယ်။ Detoxification ပါလုပ်ပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက် ကျန်းမာရေးအတွက်ပါ အထောက်အကူပြုပြီး ရေရှည်အားဆေးအဖြစ် စွဲသောက်လို့ ရပါတယ်။ ဒီလိုအကျိူးကျေးဇူးများတဲ့ Mosbeau Placenta White Advanced Food Supplement ကို Derma Grand ကနေ တစ်ဦးတည်း ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်နဲ့ FDA ခွင့်ပြုချက်တွေနဲ့ အမျိူးသမီး၊ အမျိူးသားတိုင်း ကျန်းမာလှပအောင် တင်သွင်းရောင်းချပေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။
မိတ်ကပ်လိမ်းတဲ့သူတိုင်း မဖြစ်မနေရှိသင့်တဲ့ Micellar Water
အရေပြားအတွင်းပိုင်းအထိ သန့်စင်ပေးမှသာ ကြည်လင်ဝင်းပတဲ့ မျက်နှာအသားအရေကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်မှာကြောင့်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ပျိုမေတို့ နေ့စဉ်ဖြတ်သန်းနေရတဲ့ဘဝမှာ Makeup Remover ဟာလည်း အရေးပါတဲ့ အခန်းကဏ္ဍတစ်ခုက အပါအဝင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလို အရေးပါတဲ့ Makeup Remover ကို ရွေးချယ်တဲ့အခါမှာလည်း မိမိတို့အသားအရည်နဲ့ ကိုက်ညီဖို့လိုပါတယ်နော်။ နောက်ထပ်တစ်ခုကတော့ အပေါ်ယံမိတ်ကပ်တွေကို သန့်စင်ပေးရုံသာမကဘဲ မျက်နှာအရေပြားအတွင်းပိုင်းထိ ဝင်ရောက်နေတဲ့အညစ်အကြေးတွေကို သန့်စင်ပေးဖို့ကလည်း အလွန်အရေးကြီးပါတယ်။ အရေပြားအတွင်းပိုင်းအထိ သန့်စင်ပေးမှသာ ကြည်လင်ဝင်းပတဲ့ မျက်နှာအသားအရေကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်မှာကြောင့်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ ပြင်သစ်နိုင်ငံထုတ် Bioderma ရဲ့ Sensibio H2O Micellar မိတ်ကပ်ဖျက်သန့်စင်ဆေးရည်နဲ့ မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။
Bioderma Micellar Water က မိတ်ကပ်တစ်ခုထဲသန့်စင်ပေးတာမဟုတ်ပါဘူး။ မိတ်ကပ်မလိမ်းလည်းနေ့ စဉ်ဖြတ်သန်းနေရတဲ့ပတ်ဝန်ကျင်ညစ်ညမ်းမှုတွေကနေ ဖြစ်စေတဲ့မျက်နှာပေါ်ရှိအညစ်ကြေးအားလုံးသန့်စင်ပေးတဲ့ Cleanser Remover အမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။
ရေညှိရဲ့အနှစ်သာရကနေဖော်ထုတ်ထားပြီး အခြားသောအရေပြားအ တွက်အရေးပါတဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့ ပေါင်းစပ်ဖန်တီးထားတဲ့ ဖော်မြူလာကနူးညံ့ညင်သာပြီး စွမ်းရည်အပြည့်အဝ ရရှိစေနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့် အရေပြားမှာရှိတဲ့ မိတ်ကပ်အပါအဝင်အညစ်အကြေးတွေအကုန်လုံးကို ဖယ်ရှားပေးနိုင်တဲ့အပြင် အရေပြားရဲ့ ခံနိုင်ရည်အားကိုလည်း တိုးတက်စေနိုင်ပါတယ်။
တချို့သော မိတ်ကပ်ဖျက်ဆေးရည်တွေနဲ့ အသားရေအလှကုန်တွေမှာဆိုရင် အရေပြားကို အန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်တဲ့ဓာတ်တွေဖြစ်တဲ့ အမွှေးနံ့သာတွေ၊ Paraben တွေနဲ့ အရက်ပျံတွေပါဝင်တတ်ပါတယ်။ Sensibio H2O မှာတော့ အန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်တဲ့ အဲဒီဓာတ်တွေ လုံးဝမပါဝင်ဘဲ ဘယ်လိုအသားအရေမျိုးနဲ့မဆို သင့်တော်အောင် ဖန်တီးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် လုံးဝအထိရှမခံတဲ့အသားရေမျိုးတွေအပါအဝင် ဘယ်လိုအသားအရေပိုင်ရှင်မျိုးမဆို စိတ်ချလက်ချအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
သဘာဝအတိုင်းကာကွယ်ပေးထားတဲ့အရေပြားအပေါ်ယံအလွှာကခန္ဓာကိုယ်ပြင်ပကနေ ရောဂါပိုးမွှားတွေ မကောင်းတဲ့အညစ်အကြေးဓာတ်တွေ ဝင်ရောက်မလာအောင်ကာကွယ်တားဆီးပေးပြီး အတွင်းထဲမှာရှိတဲ့ရေ ဓာတ်တွေမဆုံးရှုံးသွားရအောင် ထိန်းသိမ်းပေးထားတဲ့အလွှာဖြစ်တာကြောင့် ဒီအလွှာရဲ့ ခိုင်မာနေမှုက အရေပြားရဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ကျန်းမာရေးအတွက် အရမ်းအရေးပါပါတယ်။ Sensibio H2O က ဒီအလွှာလေးကို ကျန်းမာနေအောင် တည်ဆောက်ပေးပါတယ်။
ဒါကြောင့်ကိုယ့်အသားအရေအတွက် အကောင်းဆုံးမိတ်ကပ်သန့်စင်ဆေးရည်ရှာဖွေနေတယ်ဆိုရင် Sensibio H2O ကို ညွှန်းပေးချင်ပါတယ်နော်။
Glow Skin ပိုင်ဆိုင်ချင်တဲ့သူတိုင်းအတွက် Product ကောင်းလေးတစ်ခု
Glow Skin မှ Glow Skin ဆိုတဲ့သူတိုင်း မဖြစ်မနေအသုံးပြုကြည့်သင့်တယ်နော်
Glass Skin၊ Glow Skin တွေက ဒီဘက်နှစ်ပိုင်းမှာ အမျိူသမီးတိုင်းလိုချင်တဲ့ အသားအရေဖြစ်လာပါတယ်။ Glass Skin ဆိုတဲ့အတိုင်း ကြည်ကြည်တောက်တောက်နဲ့ ဝင်းဝင်းအိအိဖြစ်နေတဲ့ အသားအရေက ကောင်းခြင်းများစွာထဲက တစ်ခုပါ။ ၂၀၂၀ မှာ ခေတ်စားနေတဲ့ Makeup Look တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Glossy Look က နဂိုအသားအရေကောင်းမှသာ ပြင်ဆင်နိုင်တဲ့ Look လေးတစ်ခုပါ။ နဂိုအသားအရေကြည်ကြည်လေးဖြစ်နေဖို့ Skincare ကို မဖြစ်မနေလုပ်ရမှာပါ။ Skincare Step တွေထဲက Serum ကလည်း အသားအရေကို သိသိသာသာကောင်းမွန်စေလို့ Editor ခုတလော အကြိုက်တွေ့နေတဲ့ Dermalogica Biolumin-c serum လေးကို Recommand ပေးချင်ပါတယ်။
Dermalogica Biolumin-C Serum က Vitamin C၊ Advanced Bio-technology၊ Ultra-stable Vitamin C Complex နည်းပညာဖြစ်လို့ အသားအရေကို တင်းရင်းတောက်ပစေပြီး ချွေးပေါက်တွေကို ကျဉ်းမြောင်းစေပါတယ်။ ဒီ Serum လေးထဲမှာ ပါဝင်တဲ့ Lactic Acid က ဆဲလ်အသေတွေကိုဖယ်ရှားပေးပြီး Skincare Product တွေကို စုပ်ယူမှုအားကောင်းစေပါတယ်။ Vitamin C Complex ပါဝင်တာကြောင့် အရေပြားအတွင်းပိုင်းမှာရှိတဲ့ Collagen တွေကို အားကောင်းလာအောင် မြှင့်တင်ပေးပြီး ပိုမိုတောက်ပကြည်လင်တဲ့ Skin ဖြစ်အောင် ပြုလုပ်ပေးပါတယ်။ Sophora Japonica Flower Extract နဲ့ Chia Seed Oil က အိုမင်းရင့်ရော်ခြင်းကိုကာကွယ်ပေးပြီး UV နဲ့ လေထုညစ်ညမ်းခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ အသားအရေညစ်ညမ်းခြင်းကို သက်သာပျောက်ကင်းစေပါတယ်။
ဒါကတော့ သူ့ရဲ့ ကောင်းကျိူးလေးတွေပေါ့နော်။ Editor အတွက်က အဆီပြန်တဲ့သူဖြစ်ပေမယ့် ဒါလေးသုံးပြီး ကြည်ကြည်လေး Glow ဖြစ်နေတဲ့ Result ကို အရမ်းသဘောကျလို့ မျက်နှာသစ်ပြီး၊ Moisturizer မလိမ်းခင် အသုံးပြုပါတယ်။ တစ်နေ့နှစ်ကြိမ်အသုံးပြုနိုင်ပြီး Dermalogica ရဲ့ ရောင်းအားအကောင်းဆုံး Product လေးတစ်ခုဖြစ်လို့ Glow Skin မှ Glow Skin ဆိုတဲ့သူတိုင်း မဖြစ်မနေအသုံးပြုကြည့်သင့်တဲ့ Product လေးပါ။